कहिलेसम्म बन्लान् ओली प्रधानमन्त्री? नयाँ सरकार गठनका लागि यस्तो छ प्रकृया :: BIZMANDU
कहिलेसम्म बन्लान् ओली प्रधानमन्त्री? नयाँ सरकार गठनका लागि यस्तो छ प्रकृया
प्रकाशित मिति: Feb 14, 2018 4:46 PM
काठमाडौँ। आज बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। कहिलेसम्म बन्लान् त ओली प्रधानमन्त्री?
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई नबुझाएसम्म नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्दैन।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली सच्याएर पठाउन दलहरुलाई आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको छ। यसअघि समानुपातिकमा सिट जित्ने पाँच दलमध्ये तीन दलले पठाएको नामावली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार समावेशी समूह नमिलेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु दलले यो समाचार तयार पार्दासम्म सच्याइएको सूची पठाइसकेको छ।
प्राप्त सूची अनुसार समावेशी समूह मिले नमिलेको यकिन गरेपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ सबै ११० उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि बल्ल नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने चर्चा मिडियामा भए पनि त्यसको अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेको प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ सञ्चार विज्ञ गोविन्द परियारले बताए। निर्वाचन आयोगले आजै अन्तिम परिणाम शितल निवासमा बुझाउने भए मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिने र त्यसअघि सम्बोधन गर्ने तयारी छ।
देउवाले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले उनलाई नै कार्यभार सञ्चालन गरिरहन भन्नेछिन्। उता, ललितपुरको मानभवनस्थित एउटा घरमा एमाले-माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठक अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच वन टु वन वार्ता भयो। आजै पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, सांगठनिक स्वरुप, पार्टी नीति र महाधिवेशन लगायतका विषयमा समितिको आजको बैठकले ठोस अवधारणा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत नभएकोले उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नेछिन्।
माओवादीले एमालेलाई समर्थन गरेको पत्रसहित एमाले संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपति समक्ष सरकार गठनको दावी गरेपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्।
यसका लागि सबै दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नु पर्छ। हालसम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नगरिसकेकोले यो प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन।
परिणाम घोषणा भएसँगै जति छिटो दलहरुले संसदीय दलको नेता चुनी बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दावीसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र बुझाउँछन्, त्यति छिटो राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्।
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र यसरी बहुमत जुटाउन सक्ने दावीसहितको पत्र प्राप्त नभएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ आकर्षित हुन्छ जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन्।
यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
कहिलेसम्म बन्लान् ओली प्रधानमन्त्री? नयाँ सरकार गठनका लागि यस्तो छ प्रकृया को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।